ukwakhiwa nokuhlangana ababambe
isikali umzobo 1: 0.5 1 2 3 4 5 6
Bepali umbhobho D
Ke ubudeki kwincam B
ngomsonto Ubude H
Ukubalwa ubukhulu kwesibambi lokwakha
D - Bepali umbhobho
B - Ke ubudeki kwincam
H - ubude umsonto
Z - ubucukubhede
Thenga Building iintsimbi akuyongxaki. Ukuthengiswa kufuneka zokubopha naliphi izihlandlo. iiklempu umbhobho, umogqumo lokulungiswa ubungakanani ezahlukeneyo kunye kuyo. Kodwa ngamanye amaxesha ukuze kubekho ivenkile ngumnyhadala kwaye ufuna ukwenza nokuhlangana obu ngokwakho.
Ikhola luquka kwincam ngomsonto kunye neenkozo zepistasi, ipleyiti kubotshwa. Ambhoxo egobile phezu umbhobho kunye inekhola metal lugqityiwe. Nembasa presser imingxuma emibini yembiwa. Ingena phezu isikhonkwane kwaye licinezelwe ngokuchasene umbhobho, njengoko eligaqa. Amaninzi asetyenziswe ekwakheni kweengcingo, leyo ziqhotyoshelwe bar imbasa.